Wasiirka Waxbarashada XFS oo la kulmay Wasiirada Waxbarashada maamul Goboleedyada – Walaal24 Newss
Wasiirka Waxbarashada XFS oo la kulmay Wasiirada Waxbarashada maamul Goboleedyada
March 5, 2019	0	By walaal24
Wasiirka wasaaradda waxbarashadda hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulahi Goodax Barre ayaa magaalada Muqdisho kulan kula qaatay wasiirada waxbarashada maamul gobaleedyada jubbaland Koonfur galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle.
Kulanka ayaa waxaa goob joog ka ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashadda Feysal Cumar Guuleed iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Axmed Xasan Yuusuf.
Arrimaha kulankan diirada lagu saaray ayaa waxaa ka mid ah horumarinta waxbarashada dalka, xoojinta xariirka ka dhaxeya wasaaradda waxbarashada iyo wasaaraddaha dowlad gobaleedyada.
Wasiirada maamul Gobaleedyada jubbaland Koonfur galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa soo dhaweyay horumarinta waxbarashada dalka iyo in leeska kaashto si caruurta Soomaaliyeed ay u helaan waxbarasho dhameystiran.
Wasiirka waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulahi Goodax Barre ayaa sheegay in kulanka ay diirada ku saareen manhajka, siyaasadda iyo sharciga Waxbarashada,dhismaha xarumaha iyo tababarka macalimiinta.
Wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii loo horumarin lahaa waxbarashada dalka.
Madaxweynaha JFS iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo ambabaxay magaalada Addis Ababba
Madaxweyne Farmaajo oo loogu soo dhaweeyay Magaalada Addis Ababa ee Dalka Itoobiya
Wasiirka Qorsheynta oo Shir Gudoomiyay Kulan looga hadlayay Qorshaha Horumarinta Qaranka Soomaaliyeed ee 2020-2024
Ciidamada Xoogga oo Howlgal ka sameeyay deegaanka Shaam ee Gobolka Shabeellaha Hoose
Kooxda Al-shabaab oo duqeyn lagula eegtay Tuulada Hargeysa Yarey ee Gobalka Jubad Dhexe
Ciidanka Xooga dalka oo kaalmo soo gaarsiiyay dadkii ay saameeyeen fatahaadaha
Dhageyso+Sawiro: Taliska Ciidanka Asluubta oo laamiyada Muqdisho ka aruriyey Caruur aan daryel haysan
Dhageyso: Ra’iisul Wasaare Khayre oo Abwaannada ugu baaqay ka qayb qaadashada qorshaha dib u dhiska Dalka
Dhageyso+Akhriso: Warmurtiyeed ka soo baxay shirkii Madaxda maamul Goboleedyada uga socday magalada Beydhabo
Dhageyso+Sawiro: Wasaradda Arimaha Dasurka oo bilowday Tababarayaasha ee Waxbarashada Madaniga Dasturka
Dhageyso: Xildhibaan Jeesow oo ka hadlay Ciidamadii Golaha Shacabka joogay oo la badalay iyo sababta loo badalay
Daawo: Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay Soomalida Magaalada Brussels
Daawo: Madaxweyne Farmaajo oo saaka Salaadda Ciidda kula tukaday kumannaan qof oo shacab ah Masjidka Isbahaysiga Islaamka
Daawo: Madaxweyne Farmaajo oo uga mahadceliyay Dowladda Eriteriya Casumadii iyo soo dhaweyntii wanagsaneyd ay u sameysay
Daawo: Gollaha wasiirada Dowlada Koonfur galbeed oo ka wada hadlay dhacdadii ka dhacaday xiligii doorashadii magaalada Beydhabo
Daawo: Dowladda Imaraadka oo gurmad noocwalba isugu jira soo gaarsi degaanada Soomaliland